Tavoahangy tavoahangy fitaratra vera, tavoahangy fanafody tariby, vera fitaratra - Hoyer
Isika manana tavoahangy feno hatsaram-panahy isan-karazany!
SAMPLES MAIMAIMPOANA azo andefasana fitsapana kalitao!
Azo natao ny endrika namboarina!
Miangavy anao hametraka hafatra aminay raha manana fanontaniana ianao, hamerina anao izahay ao anatin'ny 8 ora.
Amin'ny maha matihanina sy mpihazakazaka mialoha ny indostrian'ny tavoahangy vera any Shina, i Hoyer Glass dia mikarokaroka momba ny fikarohana sy ny famolavolana, ny famolavolana, ny fanamboarana, ny famokarana, ny varotra sy ny varotra amin'ny karazan-jiro vita amin'ny kalitao avo lenta rehetra.
Ankehitriny, izahay dia miasa amin'ny andian-dahatsoratra fitaratra isan-karazany miaraka amin'ny karazana an'arivony, toy ny tavoahangy fikarakarana manokana, tavoahangy divay, fitaterana fitaratra an-dakozia, tavoahangy fitaratra, tavoahangy pharmaceutika, tavoahangy zava-pisotro ary ny vokatra hafa mifandraika amin'izany.